Halkey iska shabahaan gaalka argagixiska ee toogtey Muslimiinta iyo kooxda gaalaynta - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Halkey iska shabahaan gaalka argagixiska ee toogtey Muslimiinta iyo kooxda gaalaynta
Halkey iska shabahaan gaalka argagixiska ee toogtey Muslimiinta iyo kooxda gaalaynta ee Shabaab/daacish iyo kuwa kale. Markii saaka lagu soo toosay xasuuqa labada masjid ee gaalku la gaadey muslimiin cibaadada ku jirey ayaa waxa durbadiiba niyada dadka ku dhacdey waa kuwii.
”Waxaan kaliya sugayay inay sheegtaan ama cod iska soo duubaan oo yiraahdaan waxaan xasuuqney koox rido ah, waxase soo baxdey markiiba in ninka fuliyay uu yahay gaal Muslimka neceb weliba aan u dhalan Niyusiland laakiin u dhashay Ustaraaliya.
Niyusiland iyo Ustaraaliya ayaa waxa xoog lagu dejiyay dadka Ingiriiska dhibka ku hayay iyo kuwo ka baxsatey hantiwadaaga maadaama ay la jireen Hitlar.
Argagixiso waa argagixiso waxay iska shabahaan fuleynimada iyo gaadmada iyo weliba xasuuqa dadka maatada ee aan waxba galabsan. Weerarada ay fuliyaana cid makala soocaan sida haweenka, caruurta iyo dadka waaweyn oo gaalada lafteedu ixtiraamaan ugu yaraan.
”Halkaan waxa nooga muuqda in xagjirku meelkasta ku Jiro oo uu lahaan karo Muslim iyo gaalba iskuna dhaqan yihiin isku sina loola dagaalamo. Laakin taasi maka dhacaysaa wadamada gaalada waa maya.
Waxa Muslim nacaybka abuura siyaasiyiinta wadamada Yurub oo intooda badan aan waxba la yeelin waayo waxay ku gabadaan xoriyada hadalka oo laga beensheegay.
Maanta dunida Muslimka waxa badankeeda barakiciyay xagjiriin iyagii gaaleeyay. Waanan ognahay meel fowdo ka jirto in diintu ku yartahay.